#raiseyourvoice | GAZETY_ADALADALA
Asandrato ny feonao ! #raiseyourvoice
Posted on 15/10/2015 by gazetyavylavitra
#RaiseYourVoice Asandrato ny feonao ! Izay no lohahevitra voizin’ny andron’ny bilaogy androany (#blogactionday #‎Oct16‬ ‪#‎BAD2015‬ )
Asandrato ny feonao! Asandratra ho an’iza anefa? Ho an’ny mpitondra ihany ve? Ho an’ny mpiray firenena? Ho an’ny eto anatiny irery? Sa ho an’izao tontolo izao?
Isan’ireo tsy mba nanaiky, ary tsy manaiky sy tsy hanaiky ny hangina aho isak’izay misy zavatra fantatro fa tsy rariny ary tokony hanandratako ny feoko! Tsy manoloana ny herisetra ara-nofo atao amin’ny hafa ihany anefa, fa izay rehetra mety ho endrik’izany herisetra izany (ara-tsaina, ara-panahy koa). Ary tsy anavahako toerana ihany koa!
Zavatra iray isan’ny nahataitra ahy ny fanakànana ahy tsy ho afaka intsony manaitra (mandefa notification) ho an’ny pejy Facebook-n’ny Fiadidiana ny Repoblika. Tany aloha anefa dia tsy nisy izay olana izay. Fanaoko mantsy izany isaky ny misy zavatra tiako hampahafantarina azy ireo sy hisarihana manokana ny sainy momba ny fiarahamonina sy ny fiainana andavanandron’ny Malagasy. Asa inona loatra no antony? Izay izaho ve dia tokony ho atahorana? “Vitsika itsahako aza tsy maty”, hoy ny namako rehefa mivazivazy iny. Koa dia gaga ny tena.
Sakafo iainan’ny Malagasy izao ny fahatapahan’ny herinaratra maharitra ora maro, ary tena maharitra ora maro tokoa. Tsy misy tsy mitaraina. Mitaraina saingy tsy sahy miteny imasom-bahoaka, mitaraina saingy tsy sahy mihetsika. Satria nahoana? – Matahotra ny hohenjehana sy hifanehatra amin’ny EMMO (fitaovam-panjakana entina hamoretana sy hanampenana ny vavan’izay tsy faly)
Eto anefa aho dia hanandratra ny feoko indray mandeha indray, ho anao Atoa Hery Rajaonarimampianina. Tsy mba vavan’olona hafa, na teny nampitaina mantsy no nanome toky anay vahoaka izay tompon’io fahefana omena tantaninareo io, dia izahay vahoaka izay mandoa ny karamanareo, izahay vahoaka izay ampijalianareo — eny, Andriamatoa, tsy vavan’olona hafa fa ny anao no nanome toky anay sy nilokaloka ary nanizingizina fa fotoana fohy monja no ilainao hanafoanana ny fahatapahan’ny herinaratra (#Delestage). Nanome fepotoana mihitsy aza ianao tamin’izay fotoana izay: 3 volana, 6 volana…Fa toa izahay vahoaka indray ity, raha ny marina, no v(oa)olana am-bolana maro, na an-taonany mihitsy.
Izaho akory tsy milaza hoe tsy nisy ny fahatapahana tany alohan’ny nitondranao. Tsy marina izany, Tena nisy tokoa. Saingy amiko(-nay), ny tenin’olondehibe – ary tsy olonolom-poana ianao—dia tokony homena voninahitra amin’ny alàlan’ny fanatanterahana azy ho asa (fa tsy kabary mitefotefoka sy mihevotrevotra fotsiny). Nampiharinao taminay ny matoritoria fa hanaterana hena, fa hay harona foana tsy misy na inona na inona no teny an-tànanao, dia iny no tianao horaisinay…Tsia, Andriamatoa, tsy ekenay ny tahaka izany. TANTERAHO NY FANOMEZANA TOKY NATAONAO…satria averiko indray, ny vavanao no nilaza io lokaloka io (araka ny hita amin’ny lahatsary etsy ambany) ary tsy olona mamo ianao raha niteny izany fa vory saina tsara mihitsy, araka izany, mahalala ny zavatra lazainy sy hataony.
Matoa anefa aho tsy misalasala manoratra sy mifandray aminareo mpitondra isan-tsokajiny ireo tamin’ny alàlan’itony tambajotra sosialy itony dia tsotra ny antony: satria te-hahita fiovàna mankany amin’ny tsaratsara kokoa, manandratra ny feo mba ho renareo satria isika rehetra manambatra ny herintsika no hahavita zavatra. Zonay ny miteny, tsy hanakiana fotsiny koa anefa, fa mba manolotra hevitra hanaovana zavatra miabo ho an’ny fiarahamonina sy ny firenena. Zonay ny mihetsika mba hitondra fiovàna fa tsy hangina lava hizàka fotsiny izay zavatra miseho (indrindra fa ny tsy mety). Gaga anefa aho fa izay rehetra miteny, ary anisany izaho manoratra, dia tratry ny fanilihana sy ny sivana, mba tsy hilazako hoe fandrahonana mivantana na ankolaka. Sivana iray mahazo ahy izao ny tsy fahafahako intsony mandefa ‘notification’ amin’ny pejy Facebook-nareo Présidence de la République de Madagascar . Tsy olako izany, fa farafaharatsiny mba nahalalako hoe hatraiza no fetran’ny fahaiza-miainan’izay mitantana (ilay pejy sy ny hafa koa aza angamba).
Aleo faranako eo fa sao hiraraka eto daholo ny alahelo tsy zaka rehetra. Fa alohan’ny tena hiatoako dia averiko indray fa maharary ny vahoaka ity fahatapahan’ny herinaratra nolazainao fa hovahanao anaty 3 na 6 volana ity. Efa mianatra mantsy izao ny zanak’ireo ‘mpampiasa anao’ ireo, ka tsinjovy ihany sao tezitra eo ireo vao hosahirana tsy handray karama eo isika rehetra. Miaraka sahirana mantsy avy eo—Azafady! Hay moa tsy ao anaty rakibolanareo ny teny hoe ‘sahirana’ sy ny hoe ‘fahasahiranana’ , fa efa natolotry ny vahokaa niaraka amin’ny fahefana nomeny anareo ny ‘fahafenoana’ sy ‘ fahasambarana’. Azafady fa diso aho tamin’iny.
Ity tsy kiana fa tena zava-nisy: ilay fampanantenana POAKATY NATAONAO
Fandraisako anjara misoratra any amin’ny http://www.blogactionday.org
Filed under: anao ny fitenenana, aterineto, BLOG ACTION DAY, fahantràna, fandriampahalemana, fiaraha-monina, herinaratra, politika, sivana, sosialy, tapatapany, tontolon'ny asa | Tagged: #‎Oct16‬, #Blogactionday, #delestage, #notification, #raiseyourvoice, #rakibolana, ‪#‎BAD2015‬, Hery Rajaonarimampianina, Madagascar |	Leave a comment »